Ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo-off one-off one-off servo motor mask mask factory
Umatshini uphela uhlanganiswe sisakhelo sezinto, ubumba, iwelding lug, ukusonga iwelding kunye nezinye izinto. Umatshini ozenzekelayo unokuvelisa kuphela iimaski zobuso ezilahlayo, kodwa hayi i-N95 kunye neemaski zestereo. Nokuba imaski yeyonyango okanye ayinanto yakwenza nomatshini. Ngethuba nje imaski inenzalo, imaski eveliswe sesi sixhobo inokusetyenziselwa imaski yotyando.
Ngokweemfuno zabathengi, umatshini we-mask ozenzekelayo wentlanzi uphuhliswe ngempumelelo e-China kwaye uthengiwe kwiimarike zangaphandle, umatshini uzenzekelayo kakhulu. Ingasetyenziselwa ukufakela i-emboss, ukusonga, ukubetha ngenqindi kunye nokusika imaski ngaxeshanye, Inkqubo yokuvelisa ekhethekileyo iqinisekisa imigca ecacileyo kwaye ayikhubazi kwimveliso, enokuthi inciphise inkunkuma ebonakalayo kwaye iqinisekise ngokufanelekileyo umgangatho wemaski evelisiweyo
Umatshini wemaski yomdada
Umatshini wokufihla iduckbill ngumatshini osebenzisa umgaqo wokuwelda ongenamthungo we-ultrasonic ukuvelisa imaski ebunjiweyo yedada efanelekileyo kushishino longcoliseko oluphezulu. Inenqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo. Inomgca omnye ukusuka ekondleni ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo. Inokutya okuzenzekelayo kwezinto ezingavunyelwanga, inkqubo yokuhambisa umgca wempumlo ezimeleyo, kwaye inokusongela umgca wempumlo kwilaphu elingalukanga ngokuzenzekelayo, ulisonge ngokuzenzekelayo kwaye usike iimveliso ezigqityiweyo, Imveliso eveliswe ngumatshini wesigqubuthelo sedada ngomlomo unembonakalo entle, ukusebenza okuzinzileyo, isivuno esikhulu, inqanaba lesiphene esiphantsi kunye nokusebenza ngokulula.
Oluzenzekelayo butterfly ikhathuni umatshini uhlobo entsha izixhobo eziphuhliswe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi; 2 ~ 6 maleko PP nonwovens spunbonded spunbonded, yasebenza carbon kunye ukuhluza izinto zisetyenziswa njengoko izinto lokondla (ngokwempembelelo ukuhluza izinto ekrwada, N95, FFP2 kunye neminye imigangatho inokufezekiswa)
Uhlobo Cup, uhlobo indebe semi-oluzenzekelayo umatshini imaski, semi-oluzenzekelayo indebe uhlobo umatshini imaski
Hot sokwakha - uhlobo indebe isigqubuthelo cofa eshushu bokwakha umatshini, esebenzisa umgaqo ngokucinezela eshushu ukugqibezela imaski emile ikomityi bokwakha. Zintandathu iindawo zokusebenzela eziphindwe kabini kumatshini omnye, kwaye abantu ababini basebenza ngaxeshanye.
Isantya esiphezulu sokushicilela impumlo ngomatshini wokugoba
Umatshini wemveliso wemaski we-kn95 / N95 ozenzekelayo uyilelwe ngokukodwa umzi-mveliso wongcoliseko kunye nomzi mveliso wezonyango. Ifanele abantu abadala, imaski yabantwana kunye nokuphefumla ngevalve yokuphefumla. Esi sixhobo sisebenzisa inkqubo yolawulo lwe-servo ukugqibezela imveliso ezenzekelayo, ukusuka kwimathiriyeli eluhlaza (iileya ezi-3 ~ 6) ukuya kwimveliso egqityiweyo, ukusebenza ngokuzenzekelayo; ingqokelela yoyilo kunye netekhnoloji ikhulile, inokuvelisa iimaski ezahlukeneyo zokugoba; imveliso egqityiweyo inentsebenzo ephezulu, ukusonga ngokuchanekileyo, ukuwelda okuhle kwendlebe, uxinzelelo olomeleleyo, ibar yempumlo yokungcwaba ngokuzenzekelayo kunye nomsebenzi wokuprinta okuzenzekelayo; izixhobo zilawulwa ngokuzenzekelayo, zisebenza kakuhle kwaye zivelisa imveliso ezinzileyo.
Ukupakisha i-Bubble Bag, Ingubo ebomvu yeBhola, Ilaphu leBlue Static Bubble, Umenzi weMaski, Umatshini weMask yobuso, Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye,